Ama-Rust Hacks 🥇 Ukukopela, i-Aimbot, i-ESP, iWallhack - iGamepron
Thola ukufinyelela kuwo wonke ama-Rust Hacks wakho owathandayo kusuka ku-Gamepron! Singakunika ukufinyelela kumaRust Hacks njenge-Aimbot, i-ESP, iWall Hack, kanye neNoRecoil.
Usuvele uthenge iHack Hack? Thola izinyathelo ezilandelayo lapha
Uyacelwa ukuthi uqaphele: Ngaphambi kokuthi uthenge ama-Rust hacks ethu, qiniseka ukuthi ithuluzi ofuna ukulithenga lisanda kubuyekezwa noma liseseku-inthanethi. Ngenkathi sihlala sibuyekeza amathuluzi ethu, kukhona ukubambezeleka kwesikhathi sokulethwa kwezinye izimo; ngenkathi kuvame ukushesha, kungathatha futhi amahora ambalwa. Onke amathuluzi ethu akhiyiwe nge-HWID, okusho ukuthi ungawasebenzisa kuphela kukhompyutha eyodwa - qiniseka ukuthi ikhompyutha yakho iyahambisana nawo wonke amathuluzi ethu ngaphambili. Akukho ukubuyiselwa kwemali okuzonikezwa uma usubonile ukhiye womkhiqizo!
Okukhethiwe kwethu Rust Hacks
Ama-Rust Hacks, i-Aimbot, i-Norecoil, i-ESP, iWall Hacks nokuningi
Posh likaHack yilelo elaligqokwe
Thenga Rust Ama-Hacks angenile 4 izinyathelo
Simboza imidlalo eminingi lapha eGamepron, ngakho-ke okokuqala, udinga ukukhetha isihloko esifanele
Kukhona futhi ama-hacks amaningi ahlukene ongakhetha kuwo, ngakho-ke khetha okulingana nezidingo zakho kangcono
Yonke inkokhelo esiyithathayo iphathwa yiprosesa yethu yokukhokha ekhethekile, eqinisekisa ukuphepha komsebenzisi
Lapho usuthole ukufinyelela kukhiye womkhiqizo ofanele, ungalanda ukukopela ngokushesha lapho kutholakala!
Kungani Usebenzisa i-Gamepron Rust Hacks?
Ukuvuselelwa kukaRust Agasti kuveze izinguquko ezinkulu ekutheni izindawo ezingaphansi kwamanzi eRust zisebenza kanjani. Ngokwengezwa komkhumbi-ngwenya, kulula kunanini ngaphambili ukuhlola wonke amakhona ezingxenyeni zamanzi ezingezansi kwamanzi, futhi ukwengezwa kwamalebhu anamachibi enyanga kwenza kube nomvuzo omkhulu ukubheka ezansi lapho.
Ngokukhishwa kwesibuyekezo sikaRust sikaJulayi, umdlalo ubonile ukukhishwa kwe-Voice Props DLC, okuvumela abadlali ukuthi benze izinto ngomsindo abangakwazi ukukwenza kuze kube manje. Isibonelo, manje usungasebenzisa omakhalekhukhwini futhi ushiye ngisho nemiyalezo yezwi emishini yokuphendula yomdlali futhi ungasebenzisa ngisho namarekhodi abadlali.
Isibuyekezo sokugcina sikaRust sigxile ekuchazeni kabusha ukuthi izifundazwe ezilimele nezilimele zisebenza kanjani emdlalweni, ngesimo esisha sokukhasa esitholakalayo esikunikeza ithuba elingcono lokubuyela emuva kunaleso esikhubazekile. Ukuvuselelwa okusha kuzoqinisekisa nokuthi i-Nvidia DLSS isebenza kahle, ikuvumela ukuthi udlale ku-UHD kuma-framerates ahambelana ngokwengeziwe.
Ukugqwala bekungenazo izibuyekezo zakamuva isikhashana, kepha lokho akusho ukuthi azikho izindaba zokuthi ukukhula komdlalo kukuthathaphi. Kubukeka sengathi ukuvuselelwa okukhulu okulandelayo kweRust kuzoba ukuguqulwa komdlalo ngokuqhafazayo, kuwenze uhambisane nezinye izihloko zesimanje ukuze ungabukeki ungowesikhathi.
Ukugqwala bekuyisihloko esidumile sokusinda eminyakeni embalwa manje, futhi lokho kusho ukuthi inani labadlali abajabulela umdlalo selikhulile kuphela. Ngenkathi kuneminye imidlalo yokusinda ekhishwayo kulezi zinsuku, imbalwa kakhulu kuyo ezoba mnandi njengoRust! Kukhona ukuheha okuthile kokuqala njengomuntu onempandla futhi uhamba ze, kuphela ukusebenza ngendlela yakho futhi ube yinkosi phakathi kwabantu. Kunezindlela eziningi ezahlukahlukene zokusondela ekudlaleni iRust, okungenzeka ukuthi kungani ithole ukubambeka ngokushesha okukhulu - ungakhetha ukuhlangana nabangani abathile futhi wakhe indawo yokukhosela enkulu, noma vele wenze izinto ngendlela yakho uthathe izinto kancane.
Akunandaba ukuthi uhlela kanjani ukudlala, ukusebenzisa amaRust Hacks wethu kuzokubeka ethubeni lokuvelela futhi uchume kulokhu kusinda. Noma ngabe kuvikela ama-troll kanye ne-griers ekufinyeleleni ezandleni zakho, noma ufuna inzuzo ngenkathi uqhuba izimpi ze-PvP (Player Versus Player). Ungangena ezinkingeni eziningi ngenkathi udlala iRust, futhi ungalahlekelwa yintuthuko yakho ngokushesha okukhulu; okudingayo nje ukujija okusheshayo kwezembe ukuqeda "ukubusa" kwakho kulo mdlalo. Yize lokho kuliqiniso, ukugqwala kwethu kweRust kuzosiza ukuvimbela leyo nto ukuthi ingenzeki.
Izibhamu nezikhali ze-projectile ziyivelakancane ku-Rust, kepha uma uthola izandla zakho kuzo, ungashaya phansi. Ngokusebenzisa ukuthandwa kweRust Aimbot yethu ne-ESP / Wall Hack, uzokwazi ukugcina ithrekhi yanoma yiziphi izinsongo ezingaba khona ezicashe ezansi kwesisekelo sakho. Uma uqala nje ungahle ungalahlekelwa okuningi, kepha labo abanezisekelo ezinkulu ezigcwaliswe ngempango baqonda ukuthi kunjani ukuhlaselwa. I-Rust Hack yethu ayigcini nje lapho kukhulunywa ngenani lezici ezikhona, kepha futhi sinikela ngokuvikelwa okwanele ngendlela yenqubo yokuvikela ukukopela etholakalayo kuphela.
Asizange sisike amakhona futhi asisoze sanikela ngekhwalithi yamathuluzi ethu ukonga idola, yingakho amakhasimende ethu ezimisele ukubuya kuzo zonke izidingo zawo zokugenca. Noma ngabe ukugqwala kweRust noma okunye ukuphamba kwemidlalo oyithandayo, i-Gamepron izokulungiselela ukuwina. Kungani uyekela izinto zazenzekela? Thenga ukhiye womkhiqizo namuhla bese ubusa abaphikisi bakho ngaphandle komzabalazo.
Ukugqwala Wall Hack (ESP)
Imininingwane yeRust Player ESP (Igama, imigoqo yezempilo, ibanga)
Rust Item ESP ngezihlungi
Rust izexwayiso zesitha
Imodi yokugqwala enkulu (akukho monakalo wokuwa lapho ucushiwe).
Rust bone & aim ukhiye okulungisekayo.
Isinxephezelo seRust Recoil
Impela Rust Hack Izici
Sebenzisa i-Rust Player ESP yethu iphelele kulabo abangafuni ukumangala, njengoba ukwazi ukubona izitha ngokusebenzisa indawo eqinile ne-opaque.
Amathambo omdlali akuyona ukuphela kwento ongayibona ngeRust ESP yethu neWall Hack, njengoba ungabona futhi amagama abo, amazinga ezempilo, nebanga labo!
Ukuphanga nokuqoqa izinsiza kubalulekile kuRust, futhi nge-Item ESP (w / filters) ungathola impango enhle kakhulu ngaphandle komsebenzi omningi.
Inhloso yakho idinga ukungabi nasici kuRust, njengoba ungathola isibhamu esisodwa. Kungakho iRust Aimbot yethu iyithuluzi elihle kakhulu ongalisebenzisa!
Rust Bullet track (isebenza ngamabanga amafushane naphakathi)
Landelela izinhlamvu zakho ku-Rust ngaphandle kokuhlupheka ngokusebenzisa isici sethu se-Rust Bullet Track (esilungele isibhamu esithathwe esifushane nasebangeni eliphakathi)
Umlayezo wokuxwayisa wangokwezifiso uzoboniswa esikrinini sakho noma kunini lapho isitha siseduze noma sihlose uhlamvu lwakho.
Imodi yokugqwala enkulu (akukho monakalo wokuwa lapho ucushiwe)
Sebenzisa imodi yethu yeRust Super Jump ukugwema ukuthatha umonakalo ekuweni kumdlalo. Gwema izitha zakho ezivela phezulu ngalesi sici sinikwe amandla!
Rust bone & aim ukhiye okulungisekayo
I-Rust Aimbot yethu iyalungiswa ngokuphelele, ikunikeze umuzwa owenziwe waba ngewakho kuphela otholakala lapha eGamepron.
Ukugqwala kokuhlola okubonakalayo kwe-aimbot
Amasheke abonakalayo ayatholakala kulabo abajabulela leso sici ku-Rust Aimbot yabo. Ilungele i-Rust gamer enelukuluku futhi enomunyu.
Ukubuyisa isinxephezelo nakho kukhona ngaphakathi kweRust Hack yethu, okuvumela ukuthi uhlose futhi udubule ngaphandle kwemiphumela. Ukugqwala kwaziwa ngokuhlehla kwayo okucasulayo!
Yiba Umdlali Wokugqwala Okuhamba phambili ePlanethi
Ukugqwala ngumdlalo onikeza ijika lokufunda elikhulu kakhulu. Uma ungakaze uyidlale ngaphambili futhi lesi yisikhathi sakho sokuqala ukudlula kulokho okuhlangenwe nakho, kungenzeka ube nesikhathi esinzima. Ungasebenzisa ama-Rust Hacks wethu ukuqinisekisa ukuthi unolwazi oluhle ngenkathi udlala, futhi uvumele izitha zazi ukuthi akufanele udideke nazo! Akudingeki ukuthi ulungiselele isipiliyoni se-lackluster.
Ama-Rust Hacks adumile futhi aphambe
Ukugqwala i-ESP neWallhack
Ukugqwala kwezinyawo, Ukulimala Okukhulu nokuqhekeka kwebanga
Amanye ama-Rust Hacks futhi aphambe
I-Gamepron i-100% izinikele ekunikezeni abasebenzisi bethu ama-Rust Hacks athandwa kakhulu futhi aphambe emakethe. Lokhu kusho ukuthi sizocwaninga futhi sithole ukuthi iziphi izici amakhasimende ethu afuna ukuzibona kakhulu kumathuluzi ethu, futhi ngemuva kokuqoqa idatha, sizozisebenzisa ngokufanele. Abanye onjiniyela be-hack bakhohlwa ngokubaluleka kokufaka izici eziningi ezahlukahlukene kuRust Hack wabo futhi bakwazi ukugxila entweni eyodwa noma ezimbili njengomphumela - lapho ufuna ukwazi ukuthi uzothola ukufinyelela kuzici eziningi kakhulu, ayikho enye indawo ongaya kuyo kuneGamepron.
Ukugqwala ngumdlalo othandwa kakhulu ngokwawo, odale isidingo esithile samaRust Hacks anokwethenjelwa nokukhohlisa online. Noma ngabe usanda kuwuthatha umdlalo okokuqala ngqa futhi unezinkinga, noma ungumdlali onolwazi ofuna nje “ukudlala uNkulunkulu” kancane, ukusebenzisa iRust Hacks yethu kuzokusiza kakhulu.
Uma ucabanga ngomdlalo ofana neRust, abantu abaningi bazowudlalela isici sokusinda. Bafuna ukwakha izinqaba futhi baqoqe izinsizakusebenza zokuthuthuka kumdlalo, kepha kuthiwani ngesici se-PvP sakho konke? Uma uhlela ukulwa nabanye abadlali ukubona ukuthi ungakwazi yini ukuvikela impango yabo, uzofuna ukuya empini ngosizo oluthile. Yilapho iRust Aimbot yethu isebenza khona, njengoba ifaka izinketho ezinjenge-Bone Prioritization ne-Auto-Aim / Fire ukukugcina uchuma emhlabeni weRust. Akunandaba ukuthi umunwe wokuqalisa wabaphikisi bakho ushesha kangakanani, njengoba uzohlala ushesha njalo.
Ungakhetha izingxenye ezithile zomzimba ongazikhomba lapho iRust Aimbot yethu inikwe amandla, kepha futhi ungavele usebenzise umsebenzi wethu we-Instant Kill ukuqeda abaphikisi bakho ngaphandle kwemibuzo ebuziwe. Ezinye izindlela eziningi zeRust Aimbot azinakubalwa futhi kwesinye isikhathi zikwenza kucace ukuthi uyagenca!
Ukusebenzisa iRust ESP yethu neWallhack nakanjani kuzokunika amandla, njengoba izitha zizodalulwa uma uzinika amandla. Uzokwazi ukubona noma yiziphi izinsongo ezingacasha endaweni yangakini, kanye nezinye izinketho ze-ESP eziwusizo. I-ESP imele i-Extra Sensory Perception, futhi ikwazi ukubona amamodeli angaphakathi komdlalo ngokusebenzisa izindawo eziqinile. Uzokwazi ukubona okuthandwa ngabadlali uqobo, nokuthi bangakanani impilo abanayo ngisho nebanga labo. Hhayi lokho kuphela, kepha ungayisebenzisa ukubona ukuthi hlobo luni lwempango / izinto olutholakala ngaphambi kokuthi ungene endaweni.
Ungazibuza ukuthi bangaki abantu abathola impumelelo embusweni wePvP weRust, kepha iningi labo liyagenca. Akuyona imfihlo ukuthi kunabaduni abaningi okufanele babhekane nabo kwi-PC, ngakho-ke kungani ungahlanganyeli nobumnandi? Ukusebenzisa i-Rust ESP neWall Hack yethu kuzokuvumela ukuthi ugijime futhi uthathe izitha ngendlela othanda ngayo.
Ukusebenzisa izinyawo zethu, ukulimala okuphezulu, nokuqhekeka kwebanga kuyindlela elula yokukhipha izinsongo ezingaba khona ngenkathi udlala iRust. Abantu nakanjani bazonyonyobela kwiseva yakho, ikakhulukazi abadlali abasezingeni eliphansi okungenzeka ukuthi bazama ukudonsa okusheshayo kuwe. Kunesizathu sokuthi kungani abantu abaningi bethembela kuma-hacks ethu ukuthi aphumelele, futhi isici seFootprint singesinye sazo - uzobona imikhondo yezinyawo emhlabathini ekuholela esitheni. Ukusuka lapho, ungasebenzisa isici se-Distance ukuzama ukuthola ukuthi isitha sikude kangakanani ngaphambi kokuzibandakanya. Ukugcina umkhondo wezinsongo ezingaba khona kulula uma uxuba zonke "izici ze-radar" eziwusizo ezinikezwa ku-Rust Hack yethu!
IHack Damage High iyasiza ngezizathu ezisobala, ngoba uzokwenza umonakalo omkhulu kunanoma yimuphi umdlali ohlangana naye. Uzoshaya kanzima kakhulu nangesikhali esiyisisekelo kunazo zonke esitholakala kumdlalo, ngakho-ke ungacabanga ukuthi ungaba nokunqandeka kanjani unamagiya ahloniphekile.
Kusenezici eziningi ongazithola uma kukhulunywa ngeRust Hack yethu, ngakho-ke ulindeni? Zizwe ukhululekile ukuthenga ukufinyelela kuwo wonke ama-Rust Cheats amahle ngokuzibophela ukhiye womkhiqizo! Sinezici abanye abanye abahlinzeki bokugenca abangenakulokotha balokothe ​​bazifake phakathi kokukhishwa kwabo, futhi yilokho okusenza sibe “ngabashintshi bomdlalo”! Lapho ufuna ukufinyelela kuma-Rust Hacks angcono kakhulu imali angayithenga, i-Gamepron ukuphela kwegama okufanele lifike engqondweni. Awukwazi ukuthembela kwabanye abahlinzeki ukuthi bakunikeze ukufinyelela kokuthandwa yiRust Aimbot, i-ESP, iWall Hack, kanye neNoRecoil - lokho kumane kuyisiqalo seqhwa, noma kunjalo! Siphinde futhi sinikeze ukuvikelwa okwanele ngesimo se-Rust Hack esingatholakali esingu-100%, sikuvumela ukuthi ukhohlise ngaphandle kokukhathazeka ngokuvinjelwa.
Ngokuchichima kwezici ongakhetha kuzo nokuphepha okukhethekile okungatholakala lapha kuphela, iRust Hack yethu iyona engcono kunazo zonke ozibonile.
Ukugqwala Hacks Imibuzo
Kungani amaRust Hacks ethu
Ama-Rust Hacks ethu ahlukile uma uwaqhathanisa nenketho yendabuko. Sinezici eziningi kakhulu zokuqhathaniswa nanoma yimuphi omunye unjiniyela we-hack, futhi sigxila kwikhwalithi yamathuluzi ethu ngokungafani nobuningi. Uma ufuna imiphumela, i-Gamepron ukuphela komhlinzeki we-hack ongamethemba. Ngeke usebenzise imali yakho uma ukhetha ukugenca nomhlinzeki ofanele.
Kungani iRust Aimbot yethu
Ukusebenzisa i-Rust Aimbot yethu kuzokubeka ethubeni lokuphumelela emdlalweni ofana neRust. Lapho ungadubula ngokunemba ukwedlula noma iziphi izinsongo ezitholakala kumdlalo, kuncane kakhulu okuzokuthakazelisa. Ungasebenzisa iRust Aimbot yethu ukuhlasela ezinye izisekelo zabadlali! I-Rust Aimbot yethu izokugcina uphila futhi ukulungele ukugawula ezinye izihlahla, lokho kuqinisekile.
Kungani iRust ESP yethu
Sebenzisa i-RUST ESP kulungile kulabo abafuna ukubona imininingwane eminingi ngangokunokwenzeka. Ungabona ukuthi hlobo luni lwempango umuntu alufihle esisekelweni sabo, nokuthi kufanele yini ukuzama ukuhlasela noma cha - ungabona noma yini ngezindawo eziqinile ezinalesi sici. Imininingwane engaphezulu izoholela empumelelweni ethe xaxa, okungako ongathembela kukho!
Kungani iRust Wallhack yethu
I-Rust Wall Hack yethu iyasiza ngoba awusoze wahlaselwa, okuyinto enkulu eRust. Abantu bazohlola isisekelo sakho izinsuku ezithile kwesinye isikhathi, kepha ngeRust Wall Hack yethu, uzobabona cishe ngokushesha. Abakwazi ukuhlela abaqamekeli lapho usendleleni yabo ngazo zonke izinyathelo ezizodwa ezithathwayo! Ama-Wall Hacks alobu bukhulu awatholakali kaningi kakhulu.
Kungani iRust Norecoil yethu
Ukubuyiselwa emuva kuyinkinga enkulu kubadlali abakwaziyo ukuphatha izikhali eRust. Bazamile ukwenza umdlalo ube ngokoqobo futhi lokho kusho ukuthi ukubuyiswa kungenangqondo, kepha ungakususa ngokuphelele ngokuvula umsebenzi wethu weNoRecoil, otholakala ngaphakathi kweRust Hack yethu. Ngeke nje kuphela ukunemba kwakho kuthuthuke, kepha akudingeki ubhekane nalolo “jittery” lokuzwa abanye abadlali beluthola ngenxa yokubuyela emuva.
Ungawalanda kanjani ama-Rust hacks amahle kakhulu?
Ama-Rust Hacks amahle kakhulu azohlala etholakala khona lapha eGamepron, futhi lokho kusho okuthile ngokuzinikela kwethu kwikhwalithi. Ungalanda i-Rust Hack yethu ngemuva kokuthi uthenge ukhiye womkhiqizo ofanele, ngokuya ngezinga lokutholakala elizungeze iHack Hack yethu uzokwazi ukuyilanda ngokushesha noma kungakapheli amahora angu-9 uthengile.
Kungani ama-Rust hacks wakho abiza kakhulu kunamanye
Ufuna ukuhlala uphephile ngenkathi ukopela, akunjalo? Kunesizathu sokuthi kungani sithathwa “njengabiza kakhulu” uma siqhathaniswa nabanye abahlinzeki be-hack abakhipha ukukhishwa njengamanje, ikakhulukazi ngoba izinsizakalo zethu zikhawulelwe. Sinezinombolo ezithile kuphela zezikhala esingazinikeza abasebenzisi bethu, okusho ukuthi asikwazi ukusebenzela wonke umuntu! Wonke ama-hacks ethu awatholakali ngo-100%.
Ungasebenza cishe nganoma yisiphi isikhathi esinqunyelwe ongathanda ukusikhetha ukukopela nathi lapha eGamepron. Sinezinkinobho zomkhiqizo ezitholakala nsuku zonke, masonto onke, nangenyanga, okukunikeza ukuguquguquka okudingekayo ukuhlola wonke amathuluzi wakho owathandayo. Noma ngabe ufuna ukugenca isikhashana noma isikhathi eside, i-Gamepron izoba nenketho efanelekile kuwe.
Awesome Rust Hack Izici